I-Polyiodontia iyinkinga yokuthuthukiswa, inani lamazinyo elingaphezu kwendabuko. Ngokuvamile, umuntu omdala kufanele abe namazinyo angu-28 kanye namazinyo amane okuhlakanipha. Futhi ukungabikho kwalokhu okulandelayo akubhekwa njengokuphambene nokujwayelekile. Kodwa-ke, kwezinye izimo, amazinyo amaningi atholakala emgodini womlomo womuntu. Lokhu kakade, ngokombono wamazinyo, i-anomaly futhi ixilongwa. Ngakho-ke, ake sicabangele ukuthi isifo siyini, yini ebangela ukuthuthukiswa kwayo? Indlela yokuphatha i-polyiodontics kubantu. Ake siqale ngokuhlelekile.
Igama lezokwelapha elithi "polyiodontia" livela kumGreki. Ngenguqulo yesiRashiya, igama elithi "odontos" lisho "izinyo," futhi isiqalo "poly" sibonisa ubuningi obukhulu . Ngakho-ke, kuvela ukuthi i-polyiodontia iyinani lamazinyo ngokweqile. Le-anomaly inamanye amagama - ukungabi nengozi, i-supradentia, amazinyo amahle noma amazinyo amaningi.
Inkinga ihlukaniswe yaba izinhlobo eziningana. Ukuhlukaniswa kwesifo kuncike ezimpawu zayo. Okubaluleke kakhulu indawo yamazinyo angaphelele. Kuye ngalokhu, i-polyiodontia kubantu ihlukaniswe ibe yinto ejwayelekile (i-atavistic) ne-atypical.
I-polyodontics ejwayelekile (i-atavistic) izuzwe okhokho bethu. Abantu basendulo babephethe i-apparatus enamandla kakhulu yokuhlakulela, futhi inani lamazinyo lidlula kakhulu umkhuba oboniswe odokotela bamazinyo. Kwezinye izimo, izakhi zofuzo zivuswa kumuntu wanamuhla, ozibonakalisa njengezinyosi eziningi. Kodwa-ke, ngenxa yesitatimende salesi sifo, akudingekile ukuthi inani lamazinyo likhulu kakhulu. I-Polyiodontia kumuntu itholakala, ngisho noma inyo elilodwa lingaphezu kwesimiso emgodini womlomo.
I-polyiodontics yama-apipical kubantu inezici zayo. Ngoba lolu hlobo lubonakala indawo yamazinyo angaphezu kwe-dentition, okungukuthi, amazinyo aqhuma ngaphandle kwesikhala se-alveolar. Futhi kwezinye izimo, ukungahloniphi okubonakalayo akubonakali ngisho nasendlini yomlomo.
I-Polyiodontia kubantu ingahluka ngokuvela. Khona-ke ihlukaniswe yaba yiqiniso futhi yamanga.
I-polyiodontia yangempela kumuntu ibonisa ngokugcwele ukuthi iyini inkinga. Ukuthuthukiswa kwalo kuhlotshaniswa nezakhi zofuzo nezici ze-teragenic. Kule nkinga, ukwakheka nokuthuthukiswa okwalandela kwe-primordia eyengeziwe ye-molars kuyadingeka ngokuphelele.
I-polyiodontia yamanga kubantu iyatholakala uma izinyo zobisi zingapheli, kodwa ihlala isebenza imisebenzi yomdabu. Ezokwelapha, kunamacala uma izinyo zobisi zitholakala kumuntu oneminyaka engaphezu kwengu-50. Ngaphezu kwalokho, i-polyodontia yamanga itholakala lapho amazinyo aseduze ehlanganiswa noma okunye ukwehlukana ekuthuthukiseni i-dentition.
Polyiodontia kubantu: izimbangela zokubonakala
Le-anomaly ibhekwa njengengqondo yokuzalwa engqondweni. Ngokwezibalo, ngaphezu kwengxenye yesithathu yamacala ahlotshaniswa nesimo sezakhi zofuzo. Uhlelo lwezinyo lwezinyo luqala ukwakha embumbeni ku-trimester yokuqala yesibili yokukhulelwa. Izinhlobo eziphazamisayo eziholela ezinkingeni zentuthuko zenzeka ngaphansi kwethonya lezici eziningi ezinonya. Lokhu kufaka phakathi: imvelo engalungile, izifo ezibangelwa amagciwane ezidluliswa ngesikhathi sokukhulelwa, ukwamukelwa ngumama wodakwa utshwala, ukuhlukunyezwa noma ukuvimbela amalungiselelo okwelapha.
Ngokuyinhloko, namuhla ososayensi abakwazi ukunikeza impendulo eqondile embuzweni wokuthuthukiswa kwe-polyiodontics, zonke izifundo ezikulo mkhakha wezokwelapha ziyacutshungulwa. Ukuze ufunde kabanzi ngokugcwele inkinga, ososayensi bayodinga ukwethulwa kobuchwepheshe obusha, isifundo esijulile se-anomaly futhi, nakanjani, isikhathi.
Iyini i-polyiodontics eyingozi
Abantu abaningi banesithakazelo ukuthi i-polyiodontia iyingozi yini? Uma amazinyo amaningi kakhulu, lokhu kubathinta kakhulu ukubunjwa kokuluma ngendlela engafanele. Phela, kungakhathaliseki ukuthi hlobo luni lwe-anomaly luyatholakala, nge-eruption, amazinyo okweqile azoshintsha izinto ezingezansi, eziseduze, ngaleyo ndlela zihlanekeze amazinyo. Ezimweni ezingavamile kakhulu amazinyo angaphelele angabangela ukuguquka kokulunywa. Ngenxa yezinkinga ezibangelwa i-polyiodontia, kukhona ukwephulwa komzimba wokugaya nokuthuthukiswa kwezifo ezihlukahlukene zesifo somzimba. Ngaphezu kwalokho, umuntu angase ahlupheke ikhanda futhi asebenze isibindi.
Ngokusho kwedatha yemininingwane, iningi lezinyosi eziningi, okungukuthi, i-supercomplex incisors ikhula ngaphandle kwe-dentition. Leli lungiselelo linomthelela omubi kakhulu ohlangothini lobuhle, oluthinta isimo sengqondo sesiguli. Umuntu uyathukuthela futhi uhoxiswe.
Inkinga elandelayo ukuthi i-supradentia ingabangela ukugcinwa kwamazinyo eziyinkimbinkimbi. Iqiniso liwukuthi ama-incisors engeziwe avame ukuvela ezindaweni ezigcinwe amazinyo aphelele. Ngenxa yalokhu, lesi sigaba, lapho siphuma, sigijima singene ezingadingekile futhi siqala ukukhula ngokungalungile noma ngisho nokuyeka ukuqhuma kwawo, okungabangeli nje kuphela inkinga ngokuluma, kodwa nokulahlekelwa amazinyo ayisisekelo.
Kungenzeka yini ukwelapha i-polyiodontics?
Inani eliningi kakhulu lamazinyo, ngokungangabazeki, livimbela umnikazi wabo ukuba aphile. Yingakho abantu baphatha le nkinga ngodokotela bamazinyo. Ukwelashwa kwe-polyiodontics, njengokwehlukana okuningi esifundeni se-maxillofacial, kwenziwa ngokuhlinzwa. Nokho, ngale ndlela kuphela i-anomaly ngokwayo iqedwa, kanti imiphumela ebangelwa yiyo ihlala. Ngenxa yalokho, isiguli sisabhalwa njengendlela yokwelapha eyengeziwe yokwelapha i-orthodontic.
Amazinyo amakhulu angasuswa, njengomthetho, ngisho nasebuntwaneni, ngoba isisu somntwana sakhiwa lapho sishintsha amazinyo obisi namazinyo omdabu. Uma i-anomaly ingaqedwa, khona-ke inqubo yokuphuca amazinyo amasha ngeke ahambe kahle. Ukuze ususe iziselisi ezingaphezu kokusika, zikhuthaza ukukhula kwazo. Ngenxa yalokhu, i-prosthesis ekhethekile igxile emhlathini. Siyabonga, ukuluma endaweni efunayo kuphakama. Ngaphezu kwalokho, hambisa ukusizakala okusizayo okuzokwenza kusebenze inqubo. Lezi zihlanganisa: ukudlidliza nokuvuselela i-electro, ukusikhipha. Emva kokufaka i-prosthesis futhi kwenziwa izinqubo ezengeziwe zinozinyo elilodwa, futhi uma ithuba livela, zisuswa. Ngeshwa, le ndlela yokwelapha ayisoze njalo. Udokotela unquma ukuthi kusetshenziswe kanjani ukwelashwa okuvela ezithombeni.
Ngokuvamile, uma ususa izinyo ezengeziwe akusebenzi, le nqubo inqatshelwe ukuhlinzwa. Ukuze umsebenzi uphumelele kakhulu, isiguli siceliwe ukuba sithole i-CT scan, i-X-ray noma i-orthopantogram. Ngenxa yesifundo esenziwe, indlela engcono yokuqeda inkinga ikhethiwe. Kuye ngesikhathi esabelwe ukusebenza, isimo sezimpande, iminyaka yesiguli kanye nenani lamazinyo amaningi, uhlobo lwe-anesthesia elisetshenzisiwe, lendawo noma jikelele, luyonqunywa. Ngemuva kokuqeda izimo eziphuthumayo ziyaqhubeka nokwelapha i-orthodontic, okukuvumela ukuba ulungise ukuluma. Kungabekwa odokotela kuphela, ngoba izindlela zokwelapha ziyizibopho.
Uma izinyo ezingaphelele zingabonakali ebuntwaneni, khona-ke uma usukhulile angeke ususwe. Yiqiniso, lolu khetho lufanelekile kuphela uma ukungahloniphi akusiyithintelo. Noma kunjalo, izinyo ezikhishiwe zisuswe nganoma isiphi isikhathi, njengoba zingabangela ukugoma okukhulu nokukhubazeka kwamazinyo.
Umuntu othola ukuthi unezifo ezifana ne-polyiodontia kufanele aqonde ukuthi inkinga ayizixazulula yona. Ukwelashwa kwe-pathology kuyimpoqo. Ngenxa yalokhu, isiguli kufanele sivakashele udokotela wamazinyo onolwazi, i-orthodontist noma udokotela ohlinzayo, ahlole ukuhlolwa okudingekayo futhi aqhubeke ngokushesha kunokwelashwa.
Umdlavuza we-prostate: wonke umuntu kufanele azi lokhu
Izindawo ezibomvu ekhanda: i-psoriasis hhayi kuphela
Izimbangela nezimpawu ze-serous meningitis
"Ongabonakali". Abalingisi we umdwebo yasekuqaleni futhi kumdlalo
Imibala Izinwele Tonic - kusukela brown ukukhanya ukuze Lilac
Isixha Bridal: ekwindla isitayela lomshado
"Parachute Golden" - kuyini? Uyini usayizi enkulu "parachute osemqoka"?